Ogaden News Agency (ONA) – Amb. Cohen oo sheegay xukuumadda yaraanka ah ee TPLF mid aan loo dulqaadan karin
Amb. Cohen oo sheegay xukuumadda yaraanka ah ee TPLF mid aan loo dulqaadan karin
Washington DC (ESAT) — Diblomaasiyadda Mareykanka ninkii ugu sareeyey xiligii maamulka George W. Bush Amb. Herman Cohen ayaa ku tilmaamay wareysi dheeroo uu Tv-ga ESAT ee mucaaradka ah la yeeshay in maamulka Wayaanaha ee TPLF ay yihiin inyaroo doonaysa inay ku amar taaglayso aqlibiyadda ayna adagtahay inay Itobiya ka hirgasho xoriyad iyo dimoqraadiyad. Amb. Cohen oo ahaa ku-xigeenka Xoghayaha Arimaha Dibadda Mareyanka u qaabilsan arimaha Afrika ayaa qayb libaax ka qaatay xiligii kala-guurka ee xukuumadii meletariga ee Mengisto Xayle Maryam looga wareejinayay xukunka 1991.
Safiirka ayaa ku booriyay dadka Itobiya in aanay is-dhiibin oy ka dhiidhayaan xukunkan macangaga ah ilaa dimoqraadiyada ay ka gaarayaan.
Waxaa ka mid ah hadaladiisa in ururka TPLF la dagaalameen oy ka qaadeen Itobiya xukun macangag ah. Waxkastoo uu sheegay waqtigaa Meles Zinawi-na ay muujinayeen inuu yahay nin aaminsan nidaamka dimoqraadiyadda. Hasa ahaatee 10 ilaa 12 sano ka dib, niyad jab ayuu nugu noqay .. waxayna isu diyaariyeen ururka TPLF inay dalka aqaliyad yar ku xukumaan , taasoo uu sheegay inay tahay arin khatar ku ah xasiloonida dalka.
Wuxuu sheegay inay ku daadaaleen 1991 in aanay Addis ababa burburin oo si nabad ah ay ula wareegaan Wayaanaha. Hadafkanaga wuxuu ahaa ayuu yidhi in si nabadgalyo ah loola kala wareego Addisababa. Ma’aanan odhinin la wareega xukuumadda ee waxaan lahayn la wareega caasimadda oo badqabta.
Wareysigaa oo arima badan uu kaga hadlayo Safiir Cohen ayuu kaga xogwaramayaa arimihii ay isla soo mareen isaga iyo Meles Zinawi iyo aragtida uu ka qabo. Waxaana ka mid ahaa hadaladiisa; way noo cadaatay inuu Meles uu xukun macangag ah oo la mid ah kuwii Itobiya horey uga jiray uu ku talajiro. Mar la weydiiyay sababta ay Mareykanka u taageerayaan xukuumadda Meles ayuu yidhi, markii lagaga guulaysatay doorashada M/W Bush ayuu Meles wuxuu sasabtay M/W Clinton isagoo maqashiiyay hadaladii uu jeclaa. Wuxuu u sheegay inuu doonayo dhaqaale furfuran iyo dimoqraadiyad, siyaabahaa ayuu Clinton ku aaminay. Waxaa kaloo jirta oo Mareykanka uu Itobiya ugu dhawaanayo waa ahmiyadda istraatiijiga ahee ay Itobiya u leedahay Mareykanka.
Wareysigan ayuu Amb Cohen waxyaaba badan uga hadlayaa ay ka mid yihiin ku-tumashda xuquuqul insaanka. Wareysiga halkan ka dhagayso.